Rasmi: Filimka Simmba iyo Arbacadiisa labaad ganacsiga uu sameeyay wuxuu dhaafay Golmaal Again – Filimside.net
Rasmi: Filimka Simmba iyo Arbacadiisa labaad ganacsiga uu sameeyay wuxuu dhaafay Golmaal Again
Ranveer Singh filimkiisa Simmba ayaa hoos u dhacii ugu horeeyay ee muuqdo sameeyay madaama uu Arbacadiisa labaad keenay 4.75 Crore ilaa 5 Crore ganacsi u dhaxeeyo wuxuuna sameeyay 15% ilaa 20% hoos u dhac ah marka lala bar bar dhigo Talaadadiisii kowaad ganacsiga uu sameeyay. Haatan waxaa muuqato in Simmba ku adkaan doonto inuu 250 Crore darajo ahaan gaaro madaama uu hoos u dhac muuqdo sameeyay Arbacadiisa labaad sidoo kalena Jimcadaan tiyaatarada lala qeebsan doono.
Simmba ayaa haatan soo xareeyay 207 Crore (Trade Figure) mudo 13-maalmood ah wuxuuna dhaafay Director Rohit Shetty flimkiisii Golmaal Again (205.50 Crore) sidoo kalena maanta oo Khamiis ah ganacsiga uu sameeyo ayuu isla Rohit Shetty filimkiisa kale Chennai Express (207.69 Crore) ganacsi ahaan dhaafi doonaa.
Simmba todobaadkiisa labaad wuxuu keeni doonaa 60 Crore taasi oo ka dhigi doonto wadarta guud inuu mudo labo todobaad ama 14-cisho soo xareeyo 210 Crore balse halka uu hiigsanaayo lama sadaalin karo madaama Jimcadaan tiyaatarada la qeebsan doonaan filimada Uri iyo Accidental Prime Minister gaar ahaan tiyaatarada Multiplex ayay Simmba siweyn ula qeebsan doonaan.
Fadlan hoos kaga bogo mudo 13-maalmood ah soo xareeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Talaado labaad – 5.50 Crore
Arbaco labaad – 4.75 Crore
Todobaadka abaad – 56.50 Crore (Mudo 6-maalmood ah)
Wadarta Guud – 206.76 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 333